Ragii ka Tirsanaa Ururka Daacish oo Maanta Lagu Xukumay Magaalada Baydhabo
September 17, 2016 – Ragan oo la soo qabtay bilawgii bishan septemper ayaa Maxkamada ciidamada waxa ay maanta ku xukuntay min 10 sano oo xarig ah, ragan ayaa lagu soo eedeeyay inay ka tirsanaayeen uruka Daacish oo weeraro kooban ka geystay gudaha dalka Soomaaliya.
Raggan ayaa dhawaan lagu soo bandhigay magaalada Baydhabo ee xarunta Gobolka Baay, kadib markii ciidamada maamulka Koonfur Galbeed ay gacata ku soo dhigeen.
Maxkamada ciidamada Qalabka sida oo saaka u fariisatay kiiska Afartaan nin ayaa la sheegay inay xukun adag ku riday, Guddoomiyaha Maxkamada ee Qaybta 60-aad Aadan Abuukar Maxamed ayaa ku dhawaaqay in xukunka Afartaan ruux uu noqday min 10-sano oo Xabsi ciidan ah.
Labada kale qof ee ay maxkamada xukunka ku riday ayaa lagu kala magacaabaa Maxamed Sheekh Maxamed iyo Cali Maxamed Gaabow oo lagu eedeeyay in labadooduba ay u xilsaarnaayeen ururkaasi fulinta dilalka qorsheysan ee kooxda Daacish ay ku talo gashay iney ka sameeyaan magaalada Baydhabo.
Maxkamada ayaa sidoo kale ku dhawaaqday in la sii daayay Saddex ruux, kuwaasi oo lala xiriiriyay inay xiriir dhaw la lahaayeen ragga uruka Daacishta ka tirsan laakiin taasi cadayn looma helin.
September 17, 2016 tuugahaladilo2015